TikTok: Walwal makugu haysaa in aad aaminto bartan laga leyahay Shiinaha? - BBC News Somali
Tusaale, dhallinyrada waxay usoo lebisanayaan sida ay doonayaan, ka dibna muuqaal ayey iska duubayaan iyagoo hees dhageysanaya - muuqaallada noocaas ah waxay gaaraan meelo fogfog.
Sidoo kale, hay'adaha eega arrimaha Baraha Bulshada waxay muujiyeen sida ay shaki uga qabaan badqabka bartan.
Dadka - oo u badan dhallinyaro - waxay barta u adeegsadaan in ay soo dhigaan muuqaal 15 il-briqsi ah. Qaarkood heeso ayay dhageysanayaan, kuwana majaajilo iyagoo adeegsanaya farsamooyiin aan caadi ahayn oo muuqaalka ay ku jarjaraan.
Shirkadda kuma cusba in muran ay dhexda u gasho. Sannadkii la soo dhaafay, si kumeelgaar ah ayaa Hindiya looga xannibay. Baaritaan Mareykanka uu sameeyay oo ahaa ka hortagga sirta la xado ayaa sababay in $4.3 milyan oo dollar lagu ganaaxo ka dib markii "si ula kac ah ay u martigeliyeen waxyaabo ay soo bandhigeen carruur yaryar".
Dadka dhalleeceeya ee Mareykanka ku nool waxay sheegayaan in App-kan ay suurtagal tahay in uu ka tanaasulo "macluumaadka u gaarka ah" dadka adeegsada.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @alexstamos
— Alex Stamos (@alexstamos) 05 Bisha Kow iyo Tobnaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @alexstamos
Laakiin barta martigelisa ee Bytedance waxay sheegeysaa in xogta asxaabteeda lagu keydiyo meel qarsoon, sidoo kalena aanan lala wadaagin maamulka Shiinaha.
Waxay bilowday adeegsiga shuruuc la xiriirta qof kasta iyo isticmaalkiisa oo ay ugu talagashay dhammaan suuqyadeeda caalamiga ah - balse hadda habka go'aan ka gaaridda Mareykanka gudaha dalkaas ayaa laga maareeyaa.
Vanessa Pappas, Agaasimaha Guud ee TikTok ee dalka Mareykanka wuxuu BBC u sheegay: "Joogteynta koboceena degdegga ah iyadoo la eegayo, waxaan sii hormarineynaa awooddeena iyo madaxbannaanida kooxda Mareykanka ku sugan."